Iindaba-Kutheni i-kindergartens ikhetha nokwadala iplastiki yamatye
Kutheni i-kindergartens ikhetha nokwadala amatye eplastiki
Kwiminyaka yakutshanje, ukusetyenziswa kwamatye eplastiki edityanisiweyo kwi-kindergartens kuye kwanda kakhulu, kwaye uninzi lweenkulisa zinokukhetha ngokubanzi ukubeka i-SPC flooring. Umgangatho luhlobo lwephepha xa luveliswa yiUmgangatho SPC Production Line. Ukusuka kulwakhiwo, ubukhulu becala luhlulwe lwangumlinganiso wephepha elinye, iphepha le-multilayer edityanisiweyo, kunye nephepha lesiseko elilinganayo; ukusuka imilo, yahlulwe izinto isikwere kunye nezinto umcu. Inkqubo ye-SPC nokwadala Ukwenza Machine inefuthe elikhulu kubomi babantu ukusukela kumhla wokuzalwa kwayo. Umgangatho weplastiki weplastiki ubizwa ngokuba ngumgangatho weplastiki. Igama elisemthethweni kufuneka libe "ngumgangatho we-PVC vinyl". Luhlobo olutsha lwezinto zokuhombisa zomgangatho eziphuhliswe ngumgangatho ophezulu kunye nophando oluphezulu kunye nophuhliso. Isebenzisa umgubo wemarble wendalo ukwenza umgangatho oxineneyo kunye noxinano oluphezulu. Isiseko esomeleleyo sokwakheka kwenethiwekhi yefayibha, umphezulu ugqunywe sisalaphu esinganyangekiyo esinxibe i-polymer se-PVC, esiqhutywa ngamakhulu eenkqubo.
Umgangatho we-kindergarten SPC luhlobo lomgangatho we-SPC, eyilelwe ngokukodwa i-kindergartens ngokweempawu ze-kindergartens. Ukusukela kumgangatho we-kindergarten SPC unothotho lwezibonelelo, kuye kwanconywa ngabantu okoko kwavela. Okwangoku, uninzi lweenkulisa lubeke olu hlobo lomgangatho weSPC enkulisa. Uhlalutyo oluthile lweempawu lunokubonakaliswa kulo mxholo ulandelayo:
Okokuqala, kuyanceda ukuqinisekisa ukhuseleko lwabantwana. Umgangatho we-SPC uneempawu zokuthamba kunye nokomelela, okunokunciphisa ukonakala kwabantwana xa bewile. Kuba abantwana bayasebenza ngokwendalo, ukungakhathali okuncinci kuya kuwa kwaye kubangele ukwenzakala, hayi abantwana kuphela, kodwa nakwidumo lenkulisa. Ukubonakala komgangatho weplastiki wamatye kwiinkulisa kunciphisa kakhulu umonakalo obangelwe lolu hlobo lomonakalo, ngenxa yoko yamkelwe zii-kindergartens.
Okwesibini, ukucocwa kunye nokugcinwa komgangatho we-kindergarten's SPC kulula. Ngenxa yokuba abantwana bathambekele ekungcoleni phantsi, ukucoca umgangatho wenkulisa kuhlala kungumsebenzi onzima. Umgangatho we-SPC unokusetyenziswa njengesixhobo seepavile esinokucocwa ngamanzi okugungxula, kwaye inani elifanelekileyo learhente yokucoca yongezwa emanzini.
Okwesithathu, umgangatho we-kindergarten SPC uneempawu zobomi obude. Umhlaba oqhelekileyo unzima, kulula ukwenza umonakalo omkhulu ekukhuleni kwabantwana, kwaye awomelele kakhulu, kwaye kulula ukubangela iingxaki ezinje ngeentanda. Ngokuchasene noko, umgangatho weplastikhi yamatye enkulisa uyayandisa kakhulu ixesha lenkonzo yeziseko zophuhliso.
UKUGCINWA KUSHISHINO kunika umgca wemveliso esemgangathweni we-SPC, siyingcali ngamava amahle! Wamkelekile kuphando kunye neqela lethu lokuthengisa!
Ixesha Post: 2021-02-28